Indlela yokwenza i-wardrobe yowesifazane ogcwele
Muva nje, inani lamakhilogremu engeziwe kanye nekhono lokugqoka kahle lilahlekelwe incazelo yalo. Ngisho nabesifazane abakhulu kakhulu bafuna ukubheka kakhulu kakhulu futhi behlelekile. Indlela yokwenza i-wardrobe yowesifazane ogcwele? Futhi-ke into esemqoka ukukhipha izingubo ezingeke zenze uhlale uphelele, kuyilapho ungadingeki ukuthi ube yinkimbinkimbi, kodwa ukukholelwa kuwe kuphela.
Ungenza kanjani ikhabethe? Sifihla ukushiyeka komuntu ophelele
Uma unamabele amakhulu
Inhlanganisela ephumelele kunazo zonke wena ungaphansi okumhlophe nomnyama. Uzothanda ama-blouses nge-V-intamo. Kuvinjelwe ukuthi ugqoke izinto eziphambili kakhulu, u-baggy, kodwa ibhande elibanzi esikhwameni lizokufanelana nawe.
Uma unamaqabunga amaningi
Inhlanganisela yombala evamile iyoba phezulu nokukhanya okumnyama. Amacu okuhamba eqondile, ama-blouses ahlanganisiwe nama-tunics.
Uma unezinyawo ezincane kanye nesisu esisodwa, khona-ke uzothanda izingubo ngezinwele ezigqamile, okuxekethile, okukhanyayo, iziketi ezishaya phansi.
Izibhulu kufanele zikhishwe emadolweni, zigibele kancane kancane, zihlanganiswe futhi zingaphansi kwamadolo, izicathulo eziphezulu.
igqoke nge-waistline ecacile,
Ifomu elula yokusika izingubo, ngaphandle kwamafrills kanye nemigqomo,
Izembatho ezisesendeni esingaphansi kwamadolo,
Umkhono we-¾, imikhono evuliwe, imikhono emide enezinkomishi.
Izincomo zabesifazane abagcwele
Buka ukuhlelwa kwakho, esikhundleni sokuphakamisa ikhanda lakho phezulu, sihlabe futhi sikhohlwe ukuthi sibheka nxazonke futhi sibhekile. Spread emahlombe akho, ngenhla ekhaleni lakho nangaphambili.
Khetha i-bra enhle wena nazo zonke izinyanga ezingu-6, ubuyekeze izingubo zangaphansi zakho, ilula.
Khetha ngokucophelela amathenda namasheya. Ukuze uthole isibalo sakho udinga ukuthenga amathani ngokufaka ukudonsa esiswini nasemapapa, ngenhla ephezulu, kufanele abe usayizi wakho.
Ungagqoke izingubo ezingaphezulu noma ezinkulu. Abaningi bakholelwa ukuthi lokhu kungafihla ukuphelela kwabo, kodwa akunjalo. Izingubo ezinjalo zenza lesi sibalo sibe nzima. Izingubo zakho kufanele zivumelane kancane emzimbeni.
Kodwa ngesikhathi esifanayo akukho lutho oluqinile kakhulu-olufanelekayo, njengoba lezi zembatho zizogcizelela ukuphelela, futhi ngeke zibukeke ngendlela enhle.
Ezingubo kufanele ukhululeke futhi kufanele ahlale kahle kuwe.
Esigqokeni akufanele kube khona imibala ehlukehlukeneyo, ngakho-ke imibala ekhanyayo izobukeka ilukhuni.
Imibala emnyama yenza lesi sibalo sibe slim, kodwa lokhu akusebenzi nje kuphela kumbala omnyama, kodwa nakwamanye amathoni amnyama. Imibala "emihle" kakhulu - eluhlaza okwesibhakabhaka, obomvu, obomvu, omnyama. Khetha umbala omnyama owuthandayo. Ungenzi amafomu abukhali futhi ushintsho olukhanyayo.
Ungagqoke amajackti amade, kuyoba ngcono ukubheka labo abade abafinyelela phakathi kwethanga.
Ungabe ugqoke imigqa engezansi noma ebanzi, kanye nezinto ezinephethini enkulu.
Ukunqunywa kwengubo kufanele kube mahhala, ubude kancane ngaphezu kwedolo noma emadolweni. Khohlwa iziketi ezivuthiwe, iziketi ze-mini, iziketi nge-hem enezinhlangothi.
Gqoka ama-blouses nge-cuts square, uma kungenjalo intamo ende kakhulu, i-V-neck iyithandwa kakhulu, kuyadingeka ukuthi intamo ihlale ivulekile.
Izicathulo ezithandwayo ngesithende, kuzokukwenza ube mncane futhi ubude. Bheka izicathulo ezinkulu nezithende ngomunwe ovulekile, ungagqoki izicathulo ngezinyosi ezikwele, kodwa amabhuzu kumele afake yonke i-caviar.
Isigqoko sabesifazane abagcwele
Ukuze ugqoke nsuku zonke, udinga ukukhetha ingubo efanele, futhi ungagqoka i-tanic ehlanganisiwe kanye ne-leggings emnyama.
Uma ikhodi yokugqoka eqinile isungulwe emsebenzini, khona-ke kuhle. Inkosikazi ephelele ayinambitheka nge-suit evumelana kahle neyenzelwe ibhizinisi. Ijackethi ehlanganisiwe, ingubo ephansi kancane noma emadolweni, kule ngubo owesifazane ogcwele uyobukeka enhle.
Ngezibuko nama-blouses, ubude babo bubalulekile. Kufanele kube entendeni engezansi noma ngaphezulu kwezintambo zakho
Ngobusuku ngaphandle, ingubo emnyama enhle enekhanda eliphezulu ifanelekile. Kodwa lapha nakwezinye izimo, izinketho zingenzeka. Kodwa akukho lutho oluthile nolunzima lapho owesifazane egqoke bonke abamnyama. Izambatho ezinjalo zokuzivikela kufanele zihlukaniswe ngesikhala esinezinhlamvu ezinhle noma isikhafu.
Bheka futhi ikhabethe lezimpahla lonyaka wonke wabesifazane .
Ungakhohlwa ukuthi iningi lakho ligcwalisa pink, inyama nomhlophe.
Thenga usayizi wakho, uma ukugeza kungenele kuwe, kuzokwenza imibimbi engadingekile futhi ikudonsa. Kufanele kube ukhululekile kuyo. Usayizi omkhulu uzokukwenza ube mkhulu nakakhulu.
Ungayinaki iseluleko sabadayisi, uma ukwaziswa futhi ulethwe, lokho ongakuthandi, ungesabi ukukhuluma ngakho.
I-Linen kumele ikhethwe, okuzolungisa noma ukufihla ukwehluleka kwakho. Amaphakheji afaka ukungena, ukusekela zangaphansi, ama-corsets, azokwenzela isithombe esihle.
Ukuze ugqoke kwansuku zonke, izingubo kufanele zisebenzise, ​​ngosuku lokuthandana - i-lace, yehholo lezemidlalo - ezemidlalo.
Abesifazane abagcwele besimiso esincane
Ayikho imikhono ebanzi namapulangwe ehlombe.
Yeka imibala ekhanyayo.
Gqoka isithende esincane.
Yenza okuthandayo emasongweni athambileyo kanye namakhanda, gwema izikhwama ezingaphezulu.
Kwabesifazane abade kakhulu
Nika amaphiko, ama-ruches, amaphakethe.
Ubude bengubo kufanele bube phakathi kwethanga.
Gqoka izingubo ngemivimbo eqondile, gwema imivimbo egobile futhi enezingqimba.
Umbala wezingubo kufanele ufihle amaphutha.
Ungaziqhathanisi nezidlo, funda ukuzithanda wena "emzimbeni." Ngemuva kwalokho, uma kukhona amakhilogremu amaningi, angeke ahambe ngosuku olulodwa, kungcono ukukhetha ngaphansi kobunjwa bawo obuhle futhi wenze ikhabethe, ukuthi ubuke kakade njengezigidi manje. Njengamanje, ungathatha futhi uthole ukukhethwa okukhulu kwezingubo ezinhle ze-figure ephelele.
Manje siyazi ukuthi singenza kanjani ikhabethe lomfazi ogcwele. Awudingi ukugxila ekuphutheni kwakho, kukhona kuwo wonke owesifazane. Kodwa kungakhathaliseki ukuthi ungubani, uma wenza ikhabethe ngendlela efanele, khona-ke uzobukeka unhle futhi unomfazi.
Umlando wama-panties wabesifazane
Ukupheka okunomsoco nokuphephile
Isaladi lesiphuzi sasendle nama-oranges
I-Alaska pollock ku-multivariate
Izinqola ze-trout nge ushizi